कृ का नायक अनमोल केसीको पारिश्रमिक कति ? - ThikThak Nepal
Home / filmi / videos / कृ का नायक अनमोल केसीको पारिश्रमिक कति ?
कुनै समयमा थोरै पारिश्रमिकमा काम गर्ने नेपाली नायकहरु हाल एउटै फिल्ममा अभिनय गरेको १० देखि ५० लाखसम्म लिने भइसकेका छन् । पछिल्लो समय फिल्म निर्माणको बजेट बढेसँगै नायकहरुले लिने पारिश्रमिक पनि बढेको छ । भर्खर मात्र नेपाल कि चलन चल्ती कि नायिका ले आफ्नो पारिश्रमिक बाट सन्तुस्ट रहेको तर ११ करोड दिए बर्षमा एउटा फिल्म मात्र खेल्ने र तेस्मा वर्ष भरि लाग्ने तर्क पेश गरिन. यस्तै १० लाख को हारा हारीमा लिने धेरै नेपाली नायिका हरु छन. नायक को हकमा भने नेपालमा फेश भ्यालु भएका र चलेका ले मज्जाले नै रकम लिने गरेका छन. प्रदिप खड्का , पल शाह र अनमोल केसी अहिले नेपाली बजार मा बढी पारिश्रमिक लिने नायक मा गनिञ्छन। प्रेमगीत बाट चलेका प्रदिप खड्का , नाइँ नभन्नु बाट चलेका पल शाह र युबा युवती माझ लोकप्रिय अनमोल केसी २० लाख को हाराहारी लिने गरेको कुरा नौलो रहेन। पछिल्लो समय युवा स्टार अनमोल केसीलाई केही निर्माताले ५० लाख पारिश्रमिकसहित फिल्म अफर गरेको खबरले यतिबेला सिनेमा क्षेत्र तातेको थियो ।
पछिल्लो धेरै जसो चलचित्र हिट दिएका अनमोल केसीको ' कृ ' आउदै छ. जुन ब्लकबस्टर हुने पक्का मानिएको छ। अनमोल लाई लिएर चलचित्र बनाउदा लगानी सुरक्षित हुने भनेर पनि निर्माता उनलाई चाहे जति दिन तयार हुञ्छन। यदि चलचित्र को लगानी सुरक्षित हुन्छ र चलचित्र हिट हुने ग्यारेण्टी हुन्छ भने कुनै पनि नायक लाई ५० लाख पारिश्रमिक दिनु ठुलो कुरा नहोला।
नेपाली नायकहरुको चर्को पारिश्रमिकको चर्चा चलिरहँदा नायक दयाहाङ राई भने अहिलेको समयमा एउटा चल्तीको नायकले ५० लाखसम्म पारिश्रमिक लिनु सही हुने तर्क पेश गर्छन् । केहीदिन अगाडि राजधानीमा पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिँदै दयाले भने, ‘एउटा चल्तीको नायकले अहिलेको समयमा ५० लाखसम्म पारिश्रमिक लिएर वर्षमा एउटा मात्र फिल्म गर्नु सही हुन्छ ।’
कुनै निर्माताले ५० लाख अफर गरेको खण्डमा के तपाई वर्षमा एउटा मात्र फिल्म गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनी अगाडि भन्छन्, ‘यदी त्यो फिल्म मेरो लागि उपयूक्त छ भने म १ लाखमा पनि काम गर्न तयार छु ।
बजार बढे संगै चलचित्र को बजेट बढेको हो र कलाकारको पारिश्रमिक पनि बढेको हो। तर चलचित्र बनाउने मेरुदण्ड निर्माता लगानी डुबेर घाटा गएर पलायन नहोस भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नु जरुरि छ।
कृ का नायक अनमोल केसीको पारिश्रमिक कति ? Reviewed by ThikThak TV on January 09, 2018 Rating: 5
अस्टमिको हत्यारालाई सजाय दिलाउन रबी लामिछाने हिडे युएइ